CBD sy diabeta - famerenana amin'ny laoniny ny siramamy ao amin'ny rà. Tsara indrindra amin'ny taona 2020
CBD sy diabeta - fampiasana menaka CBD handanjalanjana ny siramamy ao | Vokatra tsara indrindra 2021
CBD sy diabeta: fampiasana menaka CBD handanjalanjana ny siramamy ao amin'ny rà
Ny rafitra cannabinoid dia mifandraika amin'ny siramamy ao amin'ny ra
CBD sy diabeta: fanamaivanana ireo soritr'aretina diabeta miaraka amin'ny CBD
Ny siansa dia nikaroka ny cannabinoids mifandraika amin'ny fitsaboana ireo soritr'aretina sy ny antony mahatonga ny diabeta. Ny fitazonana rafitra homeostatic voalanjalanja dia toa fanalahidin'ny fitsaboana vaovao an'io aretina io mifototra amin'ny rongony Sativa. Na dia mbola tsy misy fanasitranana aza, ny sasany amin'ireo soritr'aretiny dia azo entina amina voninkazo sy hetra.
Ny diabeta dia andiam-panafody metabolika ateraky ny tsy fahafahan'ny vatana mifehy ny haben'ny siramamy, indrindra ny glucose ao amin'ny ra. Ny haavon'ny glukose dia fehezin'ny hormonina toy ny insuline, izay vokarina ao amin'ny sarakaty. Ny diabeta dia mety miteraka fahasarotana maharitra, toy ny aretim-po, aretim-po, na fahasimban'ny voa sy ny maso.
Tao anatin'izay taona faramparany izay dia mihamaro ny fikarohana manamarina ny porofo tsy mitongilana omen'ny marary diabeta ary mampiseho izany CBD menaka misy vokany mahasoa. Ny toetra manohitra ny inflammatoire an'ny CBD ary koa ny THC, dia mampihena ny fivontosan'ny arteria, famantarana ny diabeta tena mahazatra, raha ny vokany kosa dia mampihena ny fivontosan'ny hozatra sy ny fanaintainana.
Ny Cannabinoids koa dia miasa ho toy ny vasodilators, izay manatsara ny fivezivezy ao amin'ny rà sy miasa amin'ny antispasmodic amin'ny hozatra sy ny rafitra gastrointestinal. Ny soritr'aretin'ny tongotra tsy milamina ateraky ny diabeta dia mety hodiovina amin'ny rongony ihany koa, hahatonga ny marary ho matory tsara kokoa. Ny fandinihana natao tany amin'ny laboratoara farany teo dia naneho fa ny rafitra endocannabinoid dia mety ho tompon'andraikitra amin'ny fanamafisana ny haavon'ny siramamy ao anaty, izay olana lehibe amin'ity aretina ity. Mampalahelo fa fikarohana any amin'ny laboratoara ihany izy ireo; tsy misy fitsaboana miorina amin'ny cannabinoid ankehitriny ho an'ny diabeta.
Na dia ilaina aza ny fikarohana ara-pahasalamana amin'ny olombelona, ​​ny andrana amin'ny laboratoara dia naneho fa misy fifamatorana mafy eo amin'ny diabeta sy ny cannabinoids. Na eo aza izany, ny fikarohana sasantsasany mampiseho ny fitaoman'ny rafitra endocannabinoid amin'ny diabeta dia natao, ary nanatsoaka hevitra izy ireo fa ny cannabidiol dia mampihena ny trangan'ny diabeta amin'ny totozy diabeta tsy matavy loatra. Araka ny fanadihadiana sasany, ny CBD dia manakana sy mampihemotra ny insulitis manimba sy ny famokarana cytokine mamaivay, izay miteraka diabeta ambany.
Ny mpikaroka sasany koa dia miresaka momba ny mekanisma fanodikodinam-bola azo tsaboina izay ampandehanan'ny CBD. Ity hypothèse ity dia nohamafisin'ny zavatra hita hafa momba ny cannabidiol sy tamin'ny fanadihadiana iray izay nahita ny vokatry ny neuroprotective an'ny CBD tamin'ny maodely fanandramana diabeta. Ny fikarohana hafa dia nahita ihany koa fa ny CBD dia manamaivana ny tsy fitrandrahana kardia amin'ny totozy izay voan'ny cardiomyopathy diabeta.
Ivelan'ny laboratoara sy ao an-tranon'ireo mararin'ny diabeta dia hitantsika ny porofo anekdotaly isan-karazany fa ny cannabinoids dia mandaitra amin'ny fitsaboana areti-maso, fanaintainana lava, fikorontanan'ny torimaso, ary aretina hafa mifandraika amin'ny diabeta. Ny fomba fitsaboana ny mararin'ny diabeta dia miankina amin'ny raha manana fahasarotana hafa sy ny fahasalamany amin'ny ankapobeny. Ny marary sasany dia mameno ny fitsaboana cannabinoid.
Raha mpampiasa CBD sy marary diabeta ianao dia tsy maintsy fantatrao fa mety hanimba ny fahazotoananao amin'ny voalohany, fa amin'ny fotoana maharitra dia misy vokany mifanohitra aminy izany ary mety hiaro amin'ny hatavezina. Ny fitrandrahana rongony miaraka amin'ny sanda THC isan-karazany, CBD, ary ny cannabinoids sy terpenes hafa, na ny CBD irery ihany, dia heverina fa mahasoa amin'ny fahasalaman'ny arteria sy ny fo.
Ireo fitrandrahana rongony na hemp ireo dia azo ampiasaina hanomanana menaka lohahevitra izay manamaivana ny fanaintainan'ny neuropathique izay matetika mifandray amin'ny diabeta. Etsy ankilany, ny risika mety hitranga eo aminao raha mpampiasa CBD sy mararin'ny diabeta dia hypoglycemia, satria atahorana hidina ny haavon'ny glucose raha tsy tsapan'ny marary izany mandra-pahavony tara loatra.
Ny karazana fanatanjahan-tena rehetra atao tsy tapaka, miaraka amin'ny sakafo ara-pahasalamana sy voalanjalanja dia hampihena ny risika diabeta ary hifehezana ny haavon'ny siramamy amin'ny olona voan'io aretina io. Ireo marary diabeta dia tokony hampandefitra ihany koa na hiala amin'ny alikaola sy paraky.
PreviousPrevious post:Inona avy ireo soa azo avy amin'ny CBD?ManarakaNext post:Inona ny solika CBD? | Vokatra tsara indrindra ho an'ny 2021